Macalin Pochettino oo ka dhawaajiyay in Harry Kane uu ka fiican yahay CRonaldo. | Radio Himilo
Home / Habka-Nolosha / Macalin Pochettino oo ka dhawaajiyay in Harry Kane uu ka fiican yahay CRonaldo.
Macalin Pochettino oo ka dhawaajiyay in Harry Kane uu ka fiican yahay CRonaldo.
Muqdisho – Tababaraha Tottenham Hotspur, Mauricio Pochettino ayaa soo jeediyay in Harry Kane uu yahay ciyaaryahan ka fiican “afar jeer ninka ku guuleystay abaal-marinta Ballon d’Or ee Cristiano Ronaldo.
32-jirkan reer Portugal ayaa dhaliyay 410 gool tartamada oo dhan sideed sano oo uu joogay Bernabeu, waxaana uu mar kale soo jiitay isagoo laba jeer shabaqa soo taabtay kulankii ay 3-1 kaga badiyeen Borussia Dortmund Champions League habeenkii Talaadada.
Halka kooxaha kale ee Group H, Kane uu dhaliyay seddexleydiisii ​​- ​​lixaad ee 2017 – isagoo keenay guushii 3-0 ee ka gaartay APOEL.
In kasta oo xiddiga heerka caalami ee dalka England uu ka fog yahay Ronaldo goolasha iyo sidoo kale koobab, Pochettino ayaa aaminsan in ciyaaryahanka uu sidiisa sideed sano ka yar uu siinayo faa’iido.
“Cristiano waa cajiib kan ugu fiican, Harry waa mid ka mid ah kuwa ugu fiican, waxaana laga yaabaa inuu ka fiican yahay, sababta oo ah waa da ‘yar, laakiin kama hadli karo sababta oo ah labadoodaba waa cajiib, nooca ciyaartoyda aad rabto kooxdaada,” ayuu Mirror u sheegay Pochettino.
“Harry Kane iyo Cristiano Ronaldo oo isku koox ah, maxaad u leedahay inaad doorato? Harry waxa uu leeyahay wax qaas ah oo ka horreysa goolka, waana sababta uu ugu fiican yahay.
“Dhammaan kuwa weerarka ah ee heerkan ah waxay leeyihiin wax gaar ah, waa kuwa dila, Harry wuxuu leeyahay xirfad gaar ah.”
Kane wali kuma guuleysan koob xirfadiisa ciyaareed.
Previous: Man City oo Etihad Stadium ku garaacday Shakhtar.